အိမ်မှာအလုပ်လုပ်စဉ် စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ? | Mycanvas
အိမ်မှာအလုပ်လုပ်စဉ် စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနိုင်မလဲ?
အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှာ Self-control ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိမ်ဆိုတာက တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီ ရုံးကသာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင့်ကိုယ်သင်ထိန်းချုပ်ရန် အတန်အသင့်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောလူတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံ အိပ်မပျော်ခြင်းနဲ့ အထီးကျန်ခြင်းတို့ကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားခြင်းဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
အကြံပေးချက် (၁) – အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု
အလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနဲ့အတူစကားပြောခြင်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကြီးကြပ်သူများ နဲ့ ပုံမှန်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းဟာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် ထိရောက်နိုင်ပါတယ်။
အကြံပေးချက် (၂) – စိတ်ပျော်စေရန်အတွက်လှုပ်ရှားမှုများ
သင်စိတ်အပန်းပြေနိုင်မယ့် အစီအစဉ်ရှိခြင်းဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းကဲ့သို့ အိမ်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သောအရားများဟာ သင့်စိတ်ကိုပြန်လည်လန်းဆန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါက အလုပ်လုပ်ရာတွင် သင့်အတွက်ပိုပြီးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
အကြံပေးချက် (၃) – လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ နေအိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ သင့်အတွက် သင့်ကိုစိတ်အပန်းပြေပြီး ပြန်လည်လန်းဆန်းစေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ တရားထိုင်ခြင်းကလည်း ထိုနည်းတူပဲ ထိရောက်စေပါတယ်။ ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပြေလက်ပျောက် အပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်တာမျိုးလုပ်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။